फायरफक्स को लागी Del.icio.us प्लग-इन Martech Zone
Del.icio.us फायरफक्स को लागी प्लग-इन
बिहीबार, डिसेम्बर 14, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
सामाजिक बुकमार्क भनेको के हो? यदि तपाईंलाई उत्तर थाहा छ ... अर्को अनुच्छेदमा जानुहोस्। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, यो एक तरीकाले प्रयोगकर्ताहरू बचत गर्न र एक अर्कासँग बुकमार्क गरिएका लिंकहरू साझा गर्न सक्दछन्। Del.icio.us एक राम्रो सेवा हो जसले तपाईंलाई लिंकहरू साझेदारी गर्न र 'ट्याग' गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँका लिंकहरू ट्याग गर्नाले तपाइँले सजिलै लि find्कहरू फेला पार्न अनुमति दिनुहुन्छ जुन तपाइँ डेल.सिओ.यूएस इन्टरफेस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
म यसको ठूलो फ्यान होइन Del.icio.us वेबसाइट, तर म तिनीहरूका सबै अतिरिक्तहरूको फ्यान हुँ। तपाईं मेरो मुख्य पृष्ठ मा लोड गरीएको Del.icio.us को लागि एक WordPress विजेट देख्नुहुनेछ (आउँदछ Automattic साइडबार विगेट्स प्लगइनको साथ)। साथै तपाईं यसलाई मेरो फिडमा प्रयोग गरेर एकीकृत देख्नुहुनेछ Feeburner's Link Splicer.
मेरो Del.icio.us को मनपर्ने प्रयोग फायरफक्स प्लगइन हो। तल छविमा ध्यान दिनुहोस्, मैले मेरो ठेगाना पट्टीमा ट्याग बटन थपेको छु। जब तपाईं त्यो बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, यसले एक राम्रो फारम पप अप गर्दछ तपाईं ट्याग गर्न र URL लाई तपाईंको Del.icio.us लाइब्रेरीमा बचत गर्नका लागि भर्न सक्नुहुन्छ।
एउटा चिसो सानो सुविधा तपाईं सायद सजग हुनुहुन्न: यदि तपाईंले पृष्ठमा केही पाठ हाइलाइट गर्नुभयो र त्यसपछि "ट्याग" क्लिक गर्नुभयो भने, यसले स्वचालित रूपमा नोट फिल्डमा हाइलाइट गरिएको पाठ टाँस्नेछ! राम्रो सानो सुविधा र टाइमसेभर! यहाँ तल एक स्क्रीनशट छ: